Hay’adda Horumarinta Waddooyinka Somaliland ayaa shir ballaadhan ku daahfurtay barnaamijka dardargelinta iyo dib-u-habaynta waddooyinka • Oodweynenews.com Oodweyne News
Hay’adda Horumarinta Waddooyinka Somaliland ayaa soo qaban qaabisay shir ballaadhan oo ay maanta isugu yimadeen dhammaan daneeyeyaasha horumarinta waddooyinka Somaliland.
Isga oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa ku amaanay guddiyada ka shaqeeya horumarinta iyo dhisida wadooyinka howsha muhiimka ah ee wadankooda u hayaan. Waxa ku booriyey in ay aqoon ahaan, farsamo ahaan iyo wada tashi ahaanba ku xidhnadaan Ha’yada wadooyinka Qaranka si waxa ay qabanayaan uu u noqdo mid mido badan laga fa’iidaysto. Waxa uu sidoo kale u balan qaadayn in wixii karan kooda ah ay kala qaban donaan dhanka qalabka iyo kharashaadka kaleba.
Ugu danbaynii waxaa kulankaasi si rasmi ah u furay Wasiirka Wasaarada Gadiidka iyo Horumarinta Waddooyinka, Md Cabdillaahi Abokor Cusmaan. Wasiir Abokor ayaa sheegay in muhiimada kulanka oo ku timaamay wadashi , xog kala qaadasho iyo aasaaska bilow wadan shaqayn togan oo mustaqbalka ah.